Kuwedzeredzwa kwekugona kuPrime Editing Platform yakaziviswa naPrime Medicine
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Kuwedzeredzwa kwekugona kuPrime Editing Platform yakaziviswa naPrime Medicine
Prime Medicine, Inc., kambani yakavambwa kuendesa pavimbiso yePrime Editing, nhasi yazivisa kuwedzera kwehunyanzvi papuratifomu yayo zvichibva mukutsvagisa kwesainzi.
"Tinofara zvikuru kuona kuvandudzwa kuri kuitika kunozowedzera kugona kwePrime Editing senzira yekurapa," akadaro Keith Gottesdiener, MD, CEO wePrime Medicine. "Kufambira mberi uku, pamusoro pehunyanzvi hwatove hwaro hwekutanga, hunogona kuwedzera hunyanzvi hwePrime Editing, uye kuchawedzera nzvimbo dzinogona kushanda nePrime Editing, zvichigona kuwedzera kusvika kwedu kune zvimwe zvirwere izvo zvisati zvave kukwanisa kugadzirisa gene. kutaura.”
Nekufambira mberi kutsva uku kwakaitwa nemasayendisiti ekunze, uye nekuedza kwePrime Medicine kuri kuramba kuchiitwa nechikwata chayo chekuvandudza chemukati, kambani inotarisira kukwidziridza kuita kwakasiyana-siyana kwePrime Editing, kunyatsoita, uye kugona. Mano anotsanangurwa mumapepa achangoburwa muNature Biotechnology neSero anogona kugonesa kuvandudzwa kweakawanda anoshanda ekurapa kuburikidza neakagadziridzwa editing chiitiko.
Imwe fambiro mberi inosanganisira yakagadziridzwa Prime Editing gwara RNA (pegRNA). Prime Editing inoshandisa pegRNA molecule kutsvaga jini chinangwa uye kutungamira kunodiwa kugadzirisa kana kugadzirisa. Mune bepa rakaburitswa muNature Biotechnology munaGumiguru 4, 2021, vanyori vanotungamirwa naDavid R. Liu, mumwe wevatangi vePrime Medicine, vakaratidza kuti yakagadziridzwa, yakagadzirwa pegRNAs (epegRNAs) inogona kuvandudza kushanda kwemaitiro ekugadzirisa kakawanda.
Iyo kambani zvakare iri kutevera ichangobva kutsanangurwa nzira dzekuvandudza mashandiro nekugadzirisa yakananga DNA kugadzirisa nzira. Mune bepa rakaburitswa muCell muna Gumiguru 14, 2021, vanyori vanotungamirwa naLiu naBritt Adamson vakaratidza imwe nzira yekugadzirisa DNA, inodaidzwa kuti mismatch kugadzirisa nzira, iyo inosimudzira zvine simba hunyanzvi hwekugadzirisa. Vakaratidza kuti basa rekugadzirisa rinogona kuwedzerwa kakati wandei, uye zvisingadiwe ne-zvigadzirwa zvinogona kudzikiswa zvakati wandei, nekugadzirisa kusawirirana kwekugadzirisa nzira kuburikidza nenzira dzinoverengeka.
Prime Medicine inobata kodzero dzekutengesa kubva kuBroad Institute yeMIT neHarvard kuti ishandise Prime Editing mukurapa kwevanhu, ukuwo masayendisiti nemakambani pasi rese vachiramba vachishandisa Prime Editing nechinangwa chekutsvaga uye zvimwe zvinoshandiswa.